QAYBI OO XUKUN: Federaalka qabyaaladeysan ee Somalia (Qaybtii 2-aad) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka QAYBI OO XUKUN: Federaalka qabyaaladeysan ee Somalia (Qaybtii 2-aad)
QAYBI OO XUKUN: Federaalka qabyaaladeysan ee Somalia (Qaybtii 2-aad)
(Hadalsame) 17 Jan 2021 – Nidaamkani waxa uu u kala qaybsamaa dhowr nooc, waxayna kala yihiin:
i)‘Federaal’ tartan(Competitive ‘federalism’): Dowladda ‘federaalka’ waxaa ay leedahay awood aad u xaddidan, mana fara-gashan karto maamul-goboleedyada maamul ahaan iyo awood ahaan toona. Noocaan waxaa isticmaala dalalka: Ingiriiska (UK), Biljim, Ustareeliya, Baakistaan, Baraasiil iyo Iswiisarlaan.
ii)‘Federaal’ iskaashi (Cooperative ‘ federalism’):Nidaamkani, dowladda ‘federaalka’ iyo maamul-goboleedyada ayaa waxay u sahqeynayaa si wadajir ah si ay u xalliyaan dhibaatooyinka ay wadaagaan. Noocaan waxaa isticmaala dalalka Jarmalka, Koofur Afrika, Imaaraadka Carabta, Maraykanka, Fenesuweela iyo Yuguslaafiya. Akhri qaybtii 1-aad…
Marka la fiiriyo sida uu u samayasmo nidaamkani iyo ujeeddooyinkiisa waxaa kuu soo baxaysa laba qaab oo kala ah: Isu-tag ka dhex-dhaca dowlado kala madax-bannaan, kuwaasoo ka tanaasulaya madax-bannaanidoodii dibadda.
Ujeedka ugu weyn ee ey u sameysmaan dowladaha ‘federaalka’ noocaan ahi waa mideynta cududdooda siyaasadeed iyo dhaqaale si ay isaga kaashadaan cadowga dibadda ee halista ku wada ah; waxana dowladahaas ka mid ah Mareykanka (1787), midowgii Iswiisarlaan (1874), Jamhuuriyaddii Jarmalka (1949), iyo weliba Imaaraadka Carabta. Inta badan, nidaamka noocaan ku abuurma waa uu hirgalay waayo wxa ay xoogga saaraan midnimo iyo wada-jir waana ay ku guuleystaan dhinac kasta sida siyaasadda, dhaqaalha iyo mileterigaba.
Ujeedka ugu weyn ee nidaamkani waa in ay dowladaha yar yari helaan awood dheeraad ah si ay mid kasta u gaarto danteeda u gaarka ah iyadoo aan u aaba-yeeleyn dowladaha kale ee yar yar iyo tan ‘federaalka’ ah toona; waxaana dowladahaas ka mid ah: Meksiko (1857), Arjantiin (1860), Baraasiil (1891), iyo Kasejoslofaakiya (1969) oo iyadu ugu dambeyntii kala googo’day.
Nidaamka ‘federaal’ ee noocaan ku abuurma waxa uu badanaa dilaa oo wiiqaa awooddii dowladahaas, ugu dambeyna waa ay kala tagaan sida laga arki karo dowladaha aan kor ku soo sheegay; waan sida laga rabo Soomaaliya oo ay haddaba ku socoto haddaan Rabbi SWT sida u dhaamin oo aanay dadka Soomaaliyeed isku-tashan xilli hore.
Previous articleShirkad Kenyan ah oo ay fadeexad culusi ku qabsatay dalka Rwanda + Sawirro
Next articleTrump oo isaga oo sii dhacaya weli musaafurinaya dad Soomaali ah (Qaar la tarxiili rabo Talaadada oo uu xilka ka degayo)